Ngabe Ukukhangiswa Kwemicimbi Kukhulisa Kanjani Isizukulwane Sokuhola Nemali Engenayo? | Martech Zone
Izinkampani eziningi zisebenzisa ngaphezulu kwe-45% yesabelomali sabo sokuthengisa nokumaketha ku ukumaketha umcimbi futhi lelo nani liyanda, alinciphi yize ukuthandwa kokumaketha kwedijithali. Akukho kungabaza emqondweni wami ngamandla okuhambela, ukubamba, ukukhuluma, ukubonisa nokuxhasa imicimbi. Iningi lemikhondo ebaluleke kakhulu yamakhasimende ethu iyaqhubeka nokuvela ngezethulo zomuntu siqu - eziningi zazo emicimbini.
Kuyini Ukukhangisa Ngezehlakalo?
Ukumaketha komcimbi kuyinqubo yokwakha umbukiso onetimu, ukubonisa, noma ukwethula ukukhuthaza umkhiqizo, insizakalo, noma injongo. Ukukhangiswa kwemicimbi kuyithuba lokwethula ibhizinisi lakho ngokukhanya okusha kumakhasimende. Ungakhombisa uhlobo lomkhiqizo nebhizinisi lakho, kanye nokwakha umuzwa omusha kumakhasimende akho. I-NCC
Ukuvumelanisa ubudlelwane bakho nomphakathi, ukumaketha kwedijithali, futhi imizamo yezokuxhumana ngokukhangiswa kwemicimbi kuzoveza imiphumela engcono kakhulu. Le infographic evela ku-NCC, inkampani yokufunda eku-inthanethi enikela nge idiploma yokuphathwa kwemicimbi, inikeza okokufaka kuzo zonke izici zokukhangiswa kwemicimbi, kufaka phakathi:
Ukukhangiswa kwemicimbi izinzuzo
Ukumaketha okusebenzayo komcimbi amasu
Ukukhulisa ukudayiswa kwe-digital ngokukhangiswa kwemicimbi
Ukukhulisa ukudayiswa komcimbi ngokumaketha kwedijithali
Ukukhuthaza ngokuphelele yokuthengisa ngokukhangiswa kwemicimbi
Ukuthuthukisa ukumaketha umcimbi wakho
Nayi i-infographic evela ku-NCC, Ukuthi Ukumaketha Komcimbi Okuphumelelayo Kungawukhulisa Kanjani Umugqa Wakho Ophansi:
Tags: ukubonisa umcimbiukudayiswa komcimbiidiploma yokuthengisa umcimbiukumaketha umcimbi infographicisethulo somcimbibonisainfographicimicimbi yokumakethanccukufunda online
I-TurnTo: Ukubuyekezwa kokuthengiswa nabasabalalisi bomkhiqizo wakho